Sida loo Fedora: Ku rakib Microsoft Office 2010 (i386, i686, x86_64) | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo Fedora: Ku rakib Microsoft Office 2010 (i386, i686, x86_64)
Perseus | | Qaybinta, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala GNU / Linux waxay nafsadeena ka helaan "baahida" inaan si toos ah ula shaqeyno Microsoft Office kumanaan sababood, qiil iyo "gar la'aan", hadaba markaan ka fikiro tan, markaan waxaan ku tusi doonaa sida loo rakibo qolkan xafiiska kooxaheena;).
Waxaa jira dhowr siyaabood oo tan lagu gaari karo, laakiin sida ay ila tahay, tan ugu fudud, ugu amniga badan uguna dhib yar ayaa jirta PlayOnLinux.
Marka hore waxaan soo dejineynaa meesha lagu keydiyo PlayOnLinux, maxaa yeelay marka loo eego, kuma imaaneyso xaruntayada software-ka :(.
Soo dejiso Keydka PlayOnLinux
Markaad soo dejiso, waxaan galnaa galka faylka lagu keydiyay: PlayOnLinux_yum-3.3.rpm oo laba jeer ayaan gujinaynaa.
Mar dambe, waxaan fureynaa terminal oo waxaan cusbooneysiineynaa keydkeena:
Waxaan rakibnay PlayOnLinux iyo ku tiirsanaanta dheeriga ah si aan u awoodno inaan rakibno oo aan u socodsiino Microsoft Office 2010 si sax ah.
sudo yum install playonlinux samba-winbind
Nota: Ma aqaano haddii noocyadii hore (Office 2007) ay lagama maarmaan tahay in la rakibo xirmada samba-winbindHaddii aad rabto inaad rakibto nooca 2007, iskuday inaad rakibto Xafiiska adigoon ku tiirsanaantaan si aadan ugu rakibin wax aanad u baahnayn;). Nidaamku ficil ahaan waa isku mid :).
Marka waxa kor ku xusan la dhammeeyo, waxaan fureynaa PlayOnLinux waxaanan ku bilaabaynaa qaabayntiisa (ha ka welwelin, ma ahan wax guriga lagu qoro: P).
Kadib shaashad "soo dhowow" ayaa soo muuqan doonta, oo soo degsan doonta Khamri, noocyada Microsoft, iyo kuwo kale. Sidaad aragtay, sanduuqyada wada hadalku waa nooca: Xiga… Xiga… ¬.¬… Next… Marka maxaad u malayn? Waxaan riixnaa Xiga XD
Waan aqbalnay liisanka waana sii wadaynaa.
Waqtigan xaadirka ah, waa inaan doorannaa qaybta Xafiiska si hadhow loo xusho Microsoft Office 2010 (Haddii aad rabto inaad rakibto nooca 2007, dooro xulashadan).
Ka dib… .¬
Waqtigan xaadirka ah waa inaan doorannaa dariiqa uu ku yaal rakibaadaha Microsoft Office, haddii uu ku dhex jiro galka, faylkiisa guriga, CD / DVD, iwm.
Nota: Haddii ay ku leeyihiin MS Office-ka ISO waa inay ku dhejiyaan, PlayOnLinux ma aqbali doono sawirada ISO;).
Xaaladdayda, waxaan ku rakibayaa gudaha galka, sidaas darteed waxaan doortaa ikhtiyaarka Kuwa kale oo waxaan tilmaamayaa wadada sida ay ugu muuqato sawirka. Haddii aad u maleyneysay inaad ku dhammeysay qaabeynta, ka raali ahaw inaad tiraahdo maya, PlayOnLinux wuxuu si otomaatig ah u bilaabi doonaa soo dejinta qaar ka mid ah ku-tiirsaneyaasha Windows si uu ugu sii wado rakibaadda, ha u dul-qaadin: Q.
Nota: Aniga ayey igu dhacday hal dhacdo in inta howshan socoto, dalabku uu sudhan yahay intaad soo degsaneyso ku tiirsanaanta, haddii isla wax isku mid ah ay ku dhacaan iyaga, inkasta oo ay tahay wax aad u yaab badan, riix batoonka baajiso oo dib u bilow hawsha markale;).
Hadda waxaan ku bilaabaynaa rakibaadda caadiga ah ee 'MS Office'.
Waxaan ku dhammeynay rakibidda. Si aad u bilawdo mid ka mid ah codsiyada kor ku xusan, waxay kaliya ku xiran tahay xulashadiisa oo gujinaya badhanka Tuur ama guuldaraysta taas, laba-guji dushiisa:
Diyaar, waxaan haynaa xafiiskeena cusub ee ku shaqeeya kumbuyuutarka;).
Sax ma tahay? : D.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Sida loo Fedora: Ku rakib Microsoft Office 2010 (i386, i686, x86_64)
Ku rakibida qaabkan, xafiisyada xafiisku ma shaqeyn doonaan dhibaato la'aan?
Waxaan rajaynayaa inaad ii sheegto hadii macrosku sifiican kuugu socdo, by fi!
Nasiib darrose ma isticmaalo macro, kuuma sheegi karin haddii ay shaqeeyaan iyo haddii kale, waxa aan sameyn karno, si aan labadeenaba uga baxno shaki, waxay noqon laheyd inaad i siiso feyl macro yar oo aad isku daydo inaad aragto haddii ay si sax ah u shaqeyso;).
Faallo dheeraad ah:
Mareegtu si sax ah ayey u ogaatay biraawsarka (Chrome), laakiin si sax ah uma ogaanin nidaamka qalliinka (openSUSE)
Waa inaad bedesho taada isticmaal si ay u ogaato qaybinta aad isticmaasho;).
Miyaanay ka fiicnayn TUX inay soo muuqato?
Ku jawaab ldd
Ku rakibidda Xafiiska halkaas kuma joogsato.
Markaa waa inaad ku rakibtaa Microsoft balastarro (xirmooyinka adeegga iyo kuwa kale). Ma la qaban karaa?
Runtii si daacad ah uma aanan isku dayin, waa inaan xusuusnaano in rakibidda barnaamijyada Windows-ka ee Linux aysan 100% waafaqsanayn, waa ku dayasho. Tusaale ahaan, suurtagal maahan in lagu rakibo MS Access hoosta GNU / Linux weli :(.
Ayaa kuu sheegay uguyaraan waan ogahay hadii aad soo dejisan karto qamriga iyo khamriga 1.4 wixii ka dambeeya laakiin taasi ma shaqeynayso hadaad isticmaasho PlayOnLinux.
Helitaanku wuxuu ka shaqeeyaa LInux.
Nooca 2003 aniga ayuu ii shaqeeyaa, laakiin kii 2007 ma shaqeynayo.
Maan isku dayin marinka 2010 laakiin 2007 way ii shaqeysaa marka lagu daro winetricks waxay kaloo ubaahantahay xirmo iyo xirmo khamri ah nooca 1.4 laakiin taasi lama shaqeyso Playonlinux, waxay ka shaqeysaa khamri saafi ah 1.4 winetricks iyo xirmada gecko marinkeyga Debian iyo LMDE 2007 ayaa aniga ii shaqeynaya.
Maan isku dayin 2010 sababtoo ah ma haysto disk rakibis ah.
Kiiskeyga waa mid aad u deggan, ma raacday wax tilmaam ah?
1.Hal eeg webka ma xasuusto laakiin haa, ku rakib khamriga ka yimaada meelaha loo yaqaan 'debian repos'.
2.Kadib ku cusboonaysii xirmada .deb ee khamriga1.4.deb ama ku rakib dusha qaabkii hore.
3.Kadib rakib xirmada gecko ee ku timaadda keydinta baaritaanka debian.
4. Ka dib ku rakib khamri-khamriga ka imanaya meelaha wax lagu tijaabiyo debian-ka sidoo kale.
Laakiin wax walba waan ku sameeyay tijaabada Debian ee fedora waa inay noqotaa rpm laakiin waa inaysan badalin habka rakibida wax badan.
Fiiro gaar ah: Wax walba waxaan ku sameeyay qaab muuqaal ah laakiin haddii aad jeceshahay waxaad ka sameyn kartaa boosteejada, cidna kuma joojineyso. XD
Laakiin taas awgood waxaa jira LibreOffcie
Waxaan ku rakibey xafiiska 2007 lubuntu 12.04, iyadoon lahayn playonlinux, ka dibna waxaan rakibey Service Pack 3 dhibaato la'aan. Marka waxaan filayaa in 2010 cusbooneysiintu ay sidoo kale shaqeyn doonto.
Nasiib darrose, Microsoft Office 2003 iyo 2007 si fiican uma shaqeeyaan marka aad isticmaaleyso dukumiintiyada adag. Uguyaraan kiiskeyga, had iyo jeer waxaa jira qaladaad aan macquul aheyn in loo isticmaalo "suite" shaqo horumarsan (iyo faallooyinka laga aqrinayo halkaas, waxay umuuqataa wax ku dhaca dad badan). Ma aqaan sida nooca 2010 u shaqeyn doono, laakiin uma maleynayo inay wax badan ka fiicnaan doonaan.
Waa inaan sheegaa inaan isku dayay inaan rakibo (Fedora 16 oo leh kde) waana suurtagal, Ubuntu waan maamulayay laakiin waa inaan rakibo maktabadaha 32-bit ah (Ubuntu iyo Fedora labaduba waa 64)
Ku jawaab Kasio
Maqaalku waa mid aad u xiiso badan, in kasta oo aan doorbidayo inaan ku isticmaalo dhammaan barnaamijyada guindows-ka ee mashiin dalwaddii ah. Waxaan u maleynayaa inay tahay mid la isku halleyn karo, fudud oo markii aad daasho aad ka takhalusi karto ka tagista nidaamkaaga Linux oo nadiif u ah foorida. Intaa waxaa dheer, dhammaan barnaamijyada xafiiska xafiisku waxay si aad ah ugu shaqeeyaan mashiinnada farsamada.
Wax marinku waa wax laga xishoodo, waxaan isku dayay marin 2010 mana jirin waddo: /
Waan isku dayi lahaa laakiin waxaan heystaa oo keliya xafiiska 2007 isla markaana accesyada ayaa ka shaqeynayay 100.
Waxaan u arkaa inay sifiican ugu muuqato Fedora.Hadaba isla Ubuntu wax lamid ah ma laga shaqeeyaa? Waxaan ku weydiinayaa maxaa yeelay waxaan rakibay nooca 2007 waqti dheer ka hor anigoon isticmaalin Play-ka Linux (si toos ah ugu xirashada Khamriga ayaa ku filneyd) sifiican ayeyna u shaqeysay Laakiin iyadoo la doonayo in si la mid ah loo sameeyo tii 2010-kii ayay barafoobeen shaashaddii rarkuna ma dhaafin.
Ku jawaab Itzcuauhtli
Waxay u shaqeysaa si isku mid ah, waxaan ku rakibay kubuntu 12.04 oo leh PlayOnLinux dhibna kuma qabin, taasi waa, uma baahnin inaan rakibo samba ku tiirsanaanta, ma waxay noqon laheyd sababta oo ah ubuntu horeyba waxay ugu keentay asal ahaan?
Ma jiraa qof garanaya sida loo xaliyo dhibaatada ka shaqeynta xafiiska 2010 ee qoob-ka-ciyaarka 'debian wheezy'?
Jawaab ku fiiq
Oo sideen u dhigaa dildilaaca XD waxaan rajeynayaa inaad iiga jawaabi karto mahadsanid 😀
Ku jawaab gus
Waa nidaam la mid ah kan Win32, kaliya u gudub galka Khamriga, marwalba marwalba liiska barnaamijyada oo guji Baadh C: Drive, halkaas ka raadi Faylasha Barnaamijka / XAFIISKA12
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay qoraalka, waxaan ku rakibey fuduntu 2013 wax walbana waa hagaagsan yihiin, Mahadsanid ..
Qreator: Codsi si loo abuuro lambarrada QR
Linux Mint 13 ayaa lagu heli karaa 2 nooc: Qorfe iyo MATE